Oracle Isixhobo sokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Oracle DBF Ukulungisa kunye nokubuyisela isoftware.
DataNumen Oracle Recovery Ingaba i eyona Oracle DBF isixhobo sokulungisa kunye nokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwihlabathi. Iyakwazi ukulungisa eyonakeleyo Oracle DBF Iifayile zedatha kunye nokubuyisa zonke iitafile kunye nezinye izinto kuzo kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela kuncitshiswa ilahleko kwifayile yenkohliso.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,638)
Ngoba DataNumen Oracle Recovery?
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen Oracle Recovery v1.0
Xhasa zonke iinguqulelo ze Oracle sedata DBF iifayile.
Inkxaso yokufumana kwakhona DBF iifayile kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, njengediski yefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokufumana kwakhona ibhetshi ye DBF iifayile.
Idityaniswe neqokobhe leWindows, ukuze ubenakho ukubuyisa ifayile ye- DBF ifayile enemenyu yokuqulathiweyo kwi-Explorer ngokulula.
Iiparameter zomgca wokuyalela.
usebenzisa DataNumen Oracle Recovery Ukufumana kwakhona uKonakele Oracle neeDathabheyisi
Xa akho DBF iifayile zonakalisiwe okanye zonakele kwaye awukwazi ukuzivula ngokwesiqhelo, ungasebenzisa DataNumen Oracle Recovery ukuskena ifayile ye DBF iifayile kwaye ufumane kwakhona idatha eninzi kubo.
Phawula: Ngaphambi kokufumana kwakhona ukonakala okanye ukonakala DBF Iifayile nge DataNumen Oracle Recovery, nceda uvale naziphi na ezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile ye- DBF iifayile.
Khetha eyonakeleyo okanye eyonakeleyo DBF ifayile eya kufunyanwa:
Ungafaka igalelo DBF igama lefayile ngqo okanye ucofe i
iqhosha lokufumana DBF ifayile eya kufumaneka kwakhona kwikhompyuter yendawo.
Ngokuzenzekela, DataNumen Oracle Recovery izakusindisa okubuyisiweyo DBF ifayile kwifayile entsha enegama elithi xxxx_recovered.DBF, apho i-xxxx ligama lomthombo DBF ifayile. Umzekelo, kumthombo DBF ifayile USERS01.DBF, igama elingagqibekanga lefayile efunyenweyo iya kuba ngu-USERS01_recovered.DBF. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
Ungafaka igama lefayile elibuyiselweyo ngokuthe ngqo okanye ucofe i
iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile efunyenweyo.
iqhosha, kwaye DataNumen Oracle Recovery Ndiza start ukuskena nokufumana kwakhona imvelaphi DBF ifayile. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukuba ngaba umthombo DBF ifayile inokuphinda ifumaneke ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Ngoku ungavula ifunyenwe DBF ifayile kwifayile Oracle.
DataNumen Oracle Recovery 1.0 ikhutshwa nge-22 kaFebruwari, 2019
Ukulungisa iMicrosoft eyonakeleyo SQL Server Iinkcukacha zolwazi ze-MDF.